Karaiba mandray matotra ny resaka ‘coronavirus’, manao tohivakana ny fandraràna fivahinianana an-tany hafa · Global Voices teny Malagasy
Fizaràna vaovao diso ao amin'ny media sôsialy, mampitombo ahiahy
Voadika ny 16 Febroary 2020 9:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Ελληνικά, English
Ilay Coronavirus vaovao ao Wuhan . Sary nozarain'ny Flickr 葉 正道 Ben (busy), CC0 1.0 Universal, sehatra ho an'ny daholobe.
Toy ireo firenena hafa, tena miasa saina be tokoa ireo firenena nosy ao Karaiba momba ireo olona miampita ny sisintanin-dry zareo. Araka izany, rehefa nambaran'ny OMS (fikambanana iraisampirenena misahana ny fahasalamàna) ho hamehana ara-pahasalamàna erantany ny fisian'ny ‘coronavirus’ — anarany ofisialy ny hoe COVID-19 — nanomboka nanao hetsika azo tsapain-tànana ireo governemanta ao amin'ny faritra.
Hatreto, tsy misy tranganà COVID-19 voamarina any amin'ireo firenena ao amin'ny faritra Amerika Latina sy Karaiba, araka ny Pan American Health Organization, izay manampy ny faritra hiomana amin'izay tranga mety hisy.
Jamaika dia iray amin'ireo faritany marobe ao Karaiba — anisan'izany i Antigua sy Barbuda, Bahamas, Dominica, ary Trinidad sy Tobago — nametraka fepetra amin'ny fivahinianana mankany sy avy any Shina, taorian'ny nahatsirihana ny fisianà COVID-19 tao amin'ny tsena iray tao Wuhan, Shina, tanàna iray misy mponina 11 tapitrisa.
Hatramin'ny 8 Febroary 2020, Barbados tsy mbola nametraka fandraràna saingy nanitrikitrika fa manaraka maso akaiky ireo varavarana rehetra fidirana ao aminy.
Tsy ny olompirenena rehetra ao Karaiba no mahazo aina amin'io fomba fanao io:
@christufton, @themohwgovjm you need to inform the Ministry of Health & Wellness in #Barbados about the severity of the #coronavirus #nCoV. If their borders are porous it will allow #infected persons to hop through #Caribbean states, avoiding quarantine.https://t.co/dBmaoA20pw pic.twitter.com/TOHhRjz2tK
@christufton, @themohwgovjm Mila ampahafantarinareo ny Ministeran'ny Fahasalamana & Hasambarana ao #Barbados ny momba ny maha-henjana ny #coronavirus #nCoV. Raha mibànaka ny sisintanin-dry zareo dia hamela ireo olona #tratry ny aretina hifindrafindra amin'ireo firenena ao #Karaiba, tsy ho hita hatoka-monina.https://t.co/dBmaoA20pw pic.twitter.com/TOHhRjz2tK
Hisy fiantraikany amin'ny ara-toekarena ao amin'ny faritra ny fepetra tahaka izany, faritra izay miankina betsaka amin'ny fizahantany — indostria iray izay voalaza fa miroborobo, satria an'arivony maro isanandro ireo mpitsidika mandray sidina mankany amin'ny iray na maromaro amin'ireo nosy. Io fisondrotana miandalana amin'ny fameperana io, noho ny fiparitahan'ilay viriosy any aminà firenena efa maherin'ny 20 dia hampangatsiatsiaka ny vanimpotoana ho an'ny indostrian'ny fivezivezena amin'ny ankapobeny ao Karaiba.
Ny orinasa “Royal Caribbean and Norwegian cruise”, mpikarakara fitetezana lavitr'ezaka dia nandray fepetra faran'izay henjana nandràra ireo mpandeha sy ireo mpiantsambo manana pasipaoro shinoa tsy hiakatra ao an-tsambony.
Matetika tsy tonga dia mitodi-doha any Shina ireo mpizahatany, fa tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nitombo be tokoa ny fivezivezena teo anelanelan'i Karaiba sy Shina. Noho ny fitomboan'ireo tetikasa vatsian'i Shina any amin'ireo nosy maro, dia nisy ny fitomboan'ny fivezivezen'ireo Shinoa mpiasa, ireo tomponandraikitra avy amn'ny fanjakàna sy ireo mpandraharaha eny amin'ireo seranampiaramanidina ao Karaiba, niteraka ahiahy teny anivon'ireo mpampiasa media sôsialy.
Mandritra izany, tsy maintsy nirosoan'ny Ministeran'ny Fahasalamàna ao Jamaika ny fandàvana ireo tatitra ” vaovao fako” na, indrindra fa ny WhatsApp.
Ny tahotra an'ilay viriosy no nitarika tamin'ny fanaovan'ny Minisitry ny fahasalamàna ao Jamaika, Dr. Christopher Tufton, ireo antsafa roa voalohany natao ho an'ny gazety tamin'ny 28 Janoary. Natao io tafa fohy io ho valin'ireo honohono nilaza fa nahitàna tranganà ‘coronavirus’ tao amin'ny Hôpitaly Oniversiteran'i Kingston any Indies Andrefana ( avy amin'ny mpandika: Kiobà, Puerto Rico, sy ireo nosy hafa ao Karaiba). Diso io honohono io, saingy mbola nitatitra azy ireny ihany ireo filazambaovao mahazatra.
Ora roa taorian'izay, tao amin'ny efitrao iray feno mpiasan'ny fampitambaovao, nanome toky ny firenena ny Minisitra Tufton hoe ilay marary, izay tonga avy any Shina, dia tsy tratry ny COVID-19, ilay ‘coronavirus’ vaovao izay, hatreto, nahafaty olona maherin'ny 1.000 tao amin'ny tanibe Shina.
Ny 30 Janoary, tany amin'ny seranampiaramanidina iraisampirenena ao Kingston, nitarika fitsidihana iray ho an'ireo mpanao gazety ny minisitra, mba hampahafantarana an'ireo Jamaikàna momba ireo dingana fitiliana napetraka eny an-toerana, ary nibitsika mikasika izany:
Nitsidika ny seranampiaramanidina iraisampirenena Norman Manley aho hijerena ireo dingana fitiliana mialoha sy ny faritra fanokana-monina ireo mpandeha vao tonga. Afa-po aho fa ampy fitaovana no sady tsara fiomanana ireo mpiasan'ny fahasalamàna. pic.twitter.com/iUmunCd3YY
Ny resadresaka faharoa momba ny hamehana, ilay nanambaràna ny fandraràna ny fisidinana avy any sy mankany Shina tao Jamaika, dia natao ny ampitso taorian'izay ary nalefa nivantana tao amin'ny pejy Facebook-n'ny ministera.
Niezaka mafy ireo hafa mpanao politika ao amin'ny faritra — isan'ireny i Keith Mitchell, praiminisitra ao Grenada — mba hamafàna ilay fandisoana vaovao ary ireo andrana hanely tahotra any anaty media sôsialy. Tao anaty kabariny ho an'ny Andron'ny Fahaleovantena, nanamarika ny praiminisitra Mitchell fa “milalao ny fihetsehampon'ny vahoaka” ireo olona manely tsaho tahaka ireny.
Ny sasany amin'ireo trano mpamoaka vaovao ao Jamaika dia nizotra nankany amin'ny fikarohana ireo teratany monina sy miaina any Shina mba hamantarana ny fomba iatrehan'izy ireo ny zavamisy:
VAOVAO: vao avy niresaka tamin'i Akara Goldson indrindra aho izao, Jamaikàna iray mpianatra ao amin'ny faritanin'i Anhui ao Shina, mitalaho amin'ny governemanta Jamaikàna mba haka azy hampody ireo hafa. Lazainy fa efa zara raha misy ny sakafo sy ny rano, ary tsy mbola natahotra tahaka izao mihitsy izy hatrizay niainany. Lazainy fa nandefa fiaramanidina naka ny terataniny ireo firenena hafa
— Dionne JacksonMiller (@djmillerJA) 30 Janoary 2020
Tanaty fanambaràna iray tamin'ny 7 Febroary, nohazavain'ny minisitry ny Raharaha Ivelany ao Jamaika fa noho ny sakana ateraky ny fampitaovana sy ny ara-bola, tsy ho vitan'ny governemanta Jamaikàna ny hampody ireo Jamaikàna miaina sy monina amin'izao fotoana izao any Wuhan. Araka ny lazain'ny Minisiteran'ny Raharaha Ivelany, amin'izao fotoana izao dia vinavinaina ho 600 ireo Jamaikàna miaina any amin'ireo faritany 23 manerana an'i Shina, mpianatra ny maro amin'izy ireo.
Raha mitohy miparitaka ny COVID-19 na eo aza ireo ezaka be ataon'i Shina hifehezana azy, mety mbola hisy fameperana sy fandraràna bebe kokoa ho ampiharina manerana ny faritra ao Karaiba. Ho hita eo ihany izay ho dikan'izany rehefa hiresaka ny fiantraikany ara-toekarena na ny fifandraisan'i Karaiba sy Shina.
Jereo ato ny fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fiantraikan'ny ‘coronavirus’ ao Wuhan.